सबैले चासो दिएको आलमको सुनुवाई अचानक किन रोकियो ? – Classic Khabar
सबैले चासो दिएको आलमको सुनुवाई अचानक किन रोकियो ?
August 27, 2021 76
नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका मोहम्मद आलमको सुनुवाई शुक्रवार हुने कुराले सर्वोच्च अदालतमा आज सबैको चासो बढेको थियो । तर अचानक शुक्रवार उनको सुनुवाई रोकिएको छ । उनलाई मानिसलाई ईँटा भट्टामा हा ले को आरोप छ । उनको विषय आज अदालतको पेशीमा चढेको भएपनि सुनुवाई नभई स्थगितल भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको पेशी नम्बर ८ मा शुक्रबार आलमविरुद्धको मु द्दा को पेशी चढेको थियो । तर, आलमको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायी पुष्प पौडेल बिरामी परेपछि पेशी स्थगित भएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु प्रकाशमानसिंह राउत र प्रकाश कुमार ढुंगनाको इजलासमा सो मु द्दा को सुनुवाइ हुँदै थियो । तर, अधिवक्ता पौडेल बिरामी परेपछि पेशी स्थगित भएको हो । सर्वोच्च अदालतले सो मु द्दा को पेशी स्थगित भएको जनाएको छ ।
२०६४ को संविधान सभा निर्वाचनका क्रममा आलमले दुईजना मानिसलाई ईँटा भट्टामा हा ले र पो ले को आरोप छ । उनी सो आरोपमा पु र्पक्ष का लागि थु ना मा छन् । रौतहटबाट २०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा कांग्रेस उम्मेदवारका रुपमा निर्वाचित आलम जे ल परेपछि सांसद पदबाट नि लम्बि त छन् ।
Prevश्रीमती मन नपरेपछि पतिले कोबरा किनेर ल्याए त्यसपछि चाले यस्तो चाल
Nextकमेडी च्याम्पियनका खबपु खड्ग पुन मगर परे ठुलै दुर्घटनामा, बल्ल बल्ल यसरि बाचे यस्तो छ पछिल्लो अवस्था हेर्नुहोस